နှစ် ၅၀ ကျော်က မွန်ဆရာတော် တစ်ပါး တည်ထား ခဲ့သည့် စေတီေ ဟာင်းတစ် ဆူ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ – Shwewiki.com
နှစ် ၅၀ ကျော်က မွန်ဆရာတော် တစ်ပါး တည်ထား ခဲ့သည့် စေတီေ ဟာင်းတစ် ဆူ အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
လွန် ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်က မွန်ဆရာတော်တစ်ပါးတည်ထားခဲ့သော စေတီဟောင်းတစ်ဆူကို အမေရိကန်နိုင်ငံ တောတွင်းတစ်နေရာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လွန် ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၅၇)နှစ်ခန့်တွင် မွန်ဆရာတော်ဦးသီလဝံသ တည် ထားခဲ့သော ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပုံစံတူ စေတီဟောင်းတစ်ဆူကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ နိုင်ငံ ခြားသားတစ်ဦးပိုင် သစ်တောပိုင် နက်ထဲတွင် ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုစေတီကိုပြန်လည်ရှာ ဖွေတွေ့ရှိသူမှာ ပိုင်းလော့ဆရာ တော်နှင့် အမေရိကန်မှ ဆရာ တော်၏ ဒကာအချို့တို့ဖြစ်ပြီး စေ တီ၏အောက်ခြေပတ်လည်နှင့် အလယ်ရစ်ထိ အုတ်များကြေမွ ပျက်စီးနေကာ ပြန်လည်မွမ်းမံရန် လိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်။
‘‘စေတီက သူများမြေပိုင် နက်ထဲမှာ။ လမ်းမကြီးနဲ့ဆို တော် တော်ဝေးတာ။ ဘယ်သူမှ မသိ နိုင်တဲ့ တောထဲမှာ’’ဟု စေတီ တော်သို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ သည့် အမေရိကန်တွင် နေထိုင်သူ မကေသီထက်က ပြောသည်။
အဆိုပါ စေတီကို ၁၉၅၈ တွင် နယူးယောက်ပြည်နယ် Allegany မြို့တွင် မစ္စတာ Gus Ruggieri ဆိုသူ လှူဒါန်းခဲ့သော မြေပေါ်တွင် မွန်ဆရာတော်က ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံတူ အငယ် စားကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း
www.muditabc. org တွင် John de Jardin ဆိုသူ က ရေးသားထားကြောင်း ပိုင်း လော့ဆရာတော်နှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၅၇)နှစ်က စေတီတည်ထားရာ နေရာ တွင်ပင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်နှင့် အဖွဲ့က ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုစေတီတည် ရှိရာ မြေနေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထား သော နိုင်ငံခြားသားထံမှ မြေ ကွက်ကို အလှူရှင်များက ပြန်လည်ဝယ်ယူထားပြီး စေတီကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။
မွန်ဆရာတော် ဦးသီလဝံသလောင်းလျာကို ၁၉၁၂ တွင် မွန်ပြည်နယ်ဝဲကလောင်ကျေးရွာ၌ မွေးဖွားပြီး အသက်(၁၅) နှစ်အရွယ်ရောက်ရှိချိန်တွင် သင်္ကန်းဆီးခဲ့သည်။
၁၉၅၅ တွင် စေတီဘုရား များ စတင်တည်ထားခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ နီပေါ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၈ တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ သင်္ဘောဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ Allegany သို့ ရောက်ရှိပြီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံတူကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လှနျ ခဲ့သော နှဈပေါငျး (၅၀)ကြျောက မှနျဆရာတျောတဈပါးတညျထားခဲ့သော စတေီဟောငျးတဈဆူကို အမရေိကနျနိုငျငံ တောတှငျးတဈနရောတှငျ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
အမရေိကနျနိုငျငံတှငျ လှနျ ခဲ့သော နှဈပေါငျး(၅၇)နှဈခနျ့တှငျ မှနျဆရာတျောဦးသီလဝံသ တညျ ထားခဲ့သော ရှတေိဂုံစတေီတျော ပုံစံတူ စတေီဟောငျးတဈဆူကို အမရေိကနျပွညျထောငျစုရှိ နိုငျငံ ခွားသားတဈဦးပိုငျ သဈတောပိုငျ နကျထဲတှငျ ပွနျလညျရှာဖှတှေေ့ ရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ယခုစတေီကိုပွနျလညျရှာ ဖှတှေရှေိ့သူမှာ ပိုငျးလော့ဆရာ တျောနှငျ့ အမရေိကနျမှ ဆရာ တျော၏ ဒကာအခြို့တို့ဖွဈပွီး စေ တီ၏အောကျခွပေတျလညျနှငျ့ အလယျရဈထိ အုတျမြားကွမှေ ပကျြစီးနကော ပွနျလညျမှမျးမံရနျ လိုအပျနကွေောငျး သိရသညျ။
‘‘စတေီက သူမြားမွပေိုငျ နကျထဲမှာ။ လမျးမကွီးနဲ့ဆို တျော တျောဝေးတာ။ ဘယျသူမှ မသိ နိုငျတဲ့ တောထဲမှာ’’ဟု စတေီ တျောသို့ သှားရောကျဖူးမွျောခဲ့ သညျ့ အမရေိကနျတှငျ နထေိုငျသူ မကသေီထကျက ပွောသညျ။
အဆိုပါ စတေီကို ၁၉၅၈ တှငျ နယူးယောကျပွညျနယျ Allegany မွို့တှငျ မစ်စတာ Gus Ruggieri ဆိုသူ လှူဒါနျးခဲ့သော မွပေျေါတှငျ မှနျဆရာတျောက ရှတေိဂုံစတေီတျောပုံစံတူ အငယျ စားကို တညျထားကိုးကှယျခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး
www.muditabc. org တှငျ John de Jardin ဆိုသူ က ရေးသားထားကွောငျး ပိုငျး လော့ဆရာတျောနှငျ့ နီးစပျသညျ့ အသိုငျးအဝိုငျးထံမှ သိရသညျ။
လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး(၅၇)နှဈက စတေီတညျထားရာ နရော တှငျပငျ ပိုငျးလော့ဆရာတျောနှငျ့ အဖှဲ့က ပွနျလညျရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ ခွငျး ဖွဈသညျ။
ယခုစတေီတညျ ရှိရာ မွနေရောကို ပိုငျဆိုငျထား သော နိုငျငံခွားသားထံမှ မွေ ကှကျကို အလှူရှငျမြားက ပွနျလညျဝယျယူထားပွီး စတေီကို မှမျးမံပွငျဆငျရနျ ပွငျဆငျနကွေသညျ။
မှနျဆရာတျော ဦးသီလဝံသလောငျးလြာကို ၁၉၁၂ တှငျ မှနျပွညျနယျဝဲကလောငျကြေးရှာ၌ မှေးဖှားပွီး အသကျ(၁၅) နှဈအရှယျရောကျရှိခြိနျတှငျ သင်ျကနျးဆီးခဲ့သညျ။
၁၉၅၅ တှငျ စတေီဘုရား မြား စတငျတညျထားခဲ့သညျ။ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြား ဖွဈသညျ့ ထိုငျး၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ နီပေါ၊ အိန်ဒိယနိုငျငံမြားသို့ သှားရောကျခဲ့ပွီး ၁၉၅၈ တှငျ အင်ျဂလနျနိုငျငံသို့ သင်ျဘောဖွငျ့ သှားရောကျခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ အမရေိကနျနိုငျငံ နယူးယောကျမွို့ Allegany သို့ ရောကျရှိပွီး ရှတေိဂုံစတေီတျောပုံစံတူကို တညျထားကိုးကှယျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်း ရောဂါ ကို တစ်ပြား မှ မကုန် ဘဲ ပျောက် ကင်းသက်သာသွား တဲ့ ဆေးနည်း
ဆံပင် ကျွတ်တာဆံပင် မသန်တာတွေအ တွက်…ဒီလောက် ထိကောင်းလိမ့်မယ် လို့မထင်ခဲ့မိတာပါ